Seteembar | 2010 | WEEJIDOW
Shirkii ay soo qabanqaabisay kooxda xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Madird ee dalka Spain ayaa qodobbadii kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in laga taageero dowladda KMG ah dagaalka ay kula jirto Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin.
War Deg Deg ah: Madaafiic ku dhacday Suuqa Bakaaraha oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah
Seteembar 29, 2010
Ugu yaraan lix qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiya inay ku dhinteen madaafiic ku dhacay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho, waxaana ku dhaawacmay in ku dhow 15-qof oo kale, sida ay HOL u sheegeen goobjoogayaal ku sugan suuqa qudaarka ee bakaaraha maanta oo Arbaco ah.
“Madaafiic badan oo ka yimid xarumaha AMISOM ayaa kusoo dhacay suuqa Bakaaraha baqonimadii maanta, waxaan arkay dhimashada dad ku dhow 10-qof oo shacab ah, kuwaasoo ku dhintay laba madfac oo suuqa kusoo dhacay, dhaawacyaduna waxay ka badnaayeen 15-qof,” ayuu yiri Maxamed Cali oo ka mid ah ganacsatada suuqaas oo saxaafadda la hadlay.
Duqemahan, ayaa yimid waxyar kaddib markii ay iskahorimaadyo u dhexeeya ciidammada AMISOM iyo kuwa dowladda oo dhinac ah iyo xoogagga kasoo horjeeda ay ka bilowdeen xaafado ka tirsan degmada Hodan, gaar ahaan xaafadaha taleex, barmuuda iyo tarabuunka, halkaasoo ay isku horfadhiyeen, iyadoo aan la ogeyn khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
Magaalada Muqdisho, ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay iskahorimaadyo u dhexeeyay ciidammada dowladda KMG ah iyo kooxaha kasoo horjeeda, kuwaasoo khasaare ay kasoo gaareen dadka shacabka ah ee ku nool Muqdisho.
Dhaawacyadii ka dhashay duqeymihii maanta ka dhacay Muqdisho ayaa loo qaaday Isbitaallada Muqdisho, iyadoo dhaawacyadaas qaarkood la sheegay inay yihiin kuwo halis ah, waxaana howlwadeennada Isbitaalka Muqdihso ay sheegeen in dhaawacyada ay imaanayaan xilli ay isbitaaallada ka buuxaan dhaawacyada dadkii ku dhaawacmay dagaalladii ka dhacay toddobaadydii lasoo dhaafay Muqdisho.
Warar kale: Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dekeda magaalada Muqdisho uu soo gaarey markab xamuul ah oo sida hub iyo qalab ciidan.
Markabkani ayaa la sheegay in uu ka soo kicitamay xeebta magaalada Mombasa ee dalka Kenya, waxaana wararku intaa ku darayaan in markabka ay saaran yihiin qalab ciidan oo la tuhunsan yahay in ay tahay deeq ka timid dawladda Mareykanka taasi oo lagu taageerayo Ciidanka Midowga Afrika ka jooga Soomaaliya ee Amisom, kuwaasi oo daafaca Dawladda Madaxweyne Shariif.
Qalabka ciidan ee uu wado markabkani ayaan la ogeyn halka uu ka keenay markii hore, waxaana dad ku sugan dekeda magaalada Muqdisho ay warbaahinta u xaqiijiyeen in uu wato calanka wadanka Sierra-leone.
Markabkani xamuulka ah ee wada hubka iyo qalabka ciidan ee soo gaarey xeebaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu imaatinkiisu ku soo beegmayaa xilli todobaadkan gudihiisa uu Mareykanku ka dhawaajiyey in uu taageero ciidan siin doono ciidanka Midowga Afirika ka jooga Muqdisho ee Amisom.
Madaxweyne iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maan tatagay Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaanno ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, iyadoo la sheegay in safarkan uu yahay mid aan rasmi ahayn.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Itoobiya Siciid Yuusuf Nuur ayaa saxaaafadda u sheegay in Madaxweyne Sheekh Shariif uu kulammo la qaadan doono madaxda dalka Itoobiya, inkastoo aan la ogeyn waxay kaga hadli doonaan, iyadoo madaxweynaha iyo wafdigiisa ay kasoo duleen dalka Spain ayna soo mareen Duabi.
“Wafdiga la socda madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Xasan Ibraahim (Yuusuf Dheeg), wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow iyo Xildhibaanad Faadumo Insaaniya, waxayna dhammaantood ka qaybgaleen shirkii looga hadlaya arrimaha dalka Soomaaliya ee ka dhacay Spain,” ayuu yiri Bashiir Aadan oo ka mid saraakiisha safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya.
Madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdigiisa ayaa toddobaadkan ka qaybgalay shirkii Qarammada Midoobay ee ka dhacay New York, shir looga hadlay Soomaaliya oo uu qabanqaabiyay Xoghayah guud ee UN-ka Ban Ki-Moon oo looga hadlay iyo shirkii Spain ee ay soo diyaarisay kooxda xiriirka caalamiga ah.
Sheekh Shariif ayaa shirarkii uu kasoo qaybgalay oo dhan ku codsaday in la taageero dowladdiisa oo dagaal kula jirta kooxaha dagaalka kula jira iyo la dagaalanka burcadbadeedda, kuwaasoo uu sheegay inay qayb ka yihiin nabadgalyo la’aanta ka taagan dalka Soomaaliya.
Taariikhdu Waa Tusmada Nolosha “DigilMiriflow” Q-10aad
Dhulalka sida goonida loo leeyahay waxa uu ka bilowdaa Jowhar iyo wixii ka koreeya, inta ka hooseysana waa kan Qaranka soomaaliyeed, hadaan tusaale u soo qaadano, Puntland waa macruuf qof ku sakhajaami kara ma jito, Somaliland waa la wada yaqaan, Gobolada Dhexe sida Gal-gaduud waa iska macruuf, Hiiraan la mid, inta soo hartey looma ogola in uu qofna sheegto, waxaa keliya banaan in lagu sheego waa dhul Soomaali, taana waxaa ay kaaga turjumeysaa in si wada jir ah looga soo wada hor jeedo midnimada qowmiyadda DigilMirifle, hadey midnimadooda helaan waxey la micno tahay bey yiraadeen ayagoo dhulkoodii heley, teeda kale waan og nahay in ay ka wada siman yihiin kasoo hor jeedida midnimada DigilMirifle, laakiin waxa ay ku heshiin la’yihiin qebsiga dhulka, waa yaabe maxaa qaranimada soomaaliya ku soo koobey oo keliya dhulka Qowmiyada DigilMirifle, maxaase ka reebey dhuldlka kale, ileyn soomaaliya waa ay weyn tahaye? Waa su’aal ay u taal nin walba oo ka jawaabi karo.
Hadaba akhristow dhul DigilMirifle oo keliya ayaa ah dhul soomaali, markaad kooda timaadidna waa laguugu qabsanayaa, oo wax kama dhisan kartid aad xukunto iskaba daayee, waxaan kaloo oran karnaa waxaan DigilMirifle aheyn lalama laha dhulkooda, lamina degi karo ayaga gudahooda mooyee, dhulka DigilMiriflena ma ahan dhul cid u khaas ah oo la weydiisto soo degistiisa ileyn waa dhul qarane.
Dhacdooyinkii foosha xumaa ee loo geysanaayey qowmiyadan DigilMirifle waxaa kaloo ka mid ahaa, nin la oran jirey “Maaling Yerow” oo reer Buur Hakaba ahaa, ahaana nin karmeed, mar walbana ka hadli jirey runta, qofkii xaqa ka hadlana reer Leego wuxuu u ahaa cadowgooda koowaad, wallow uu yahay qof ayaga ah.
Maalim Yerow waxaa mar walba loo sameyn jirey dembiyo aan waxba ka jirin, sidii mar walba xabsiga loogu taxaabi lahaa, mar allaale iyo markii la xiraba sidey caadada u ahaan jirtey la jir dili jirey, si ba’ana loo ciqaabi jirey.
Maaling Yerow mar allaale iyo marka la soo daayo hadaladiisii ayuu bilaabi jirey, oo dadkiisa ayuu u dagaalami jirey, mar walbana meel fagaaro ah ayuu ka hadli jirey asagoo cuskanaaya dhibka ay Mahaatiri ku hayeen DigilMirifle, xisbiga Leego Mahaatiri waxaa dab ay ku gubtaan ku noqdey hadaladii uu Maaling Yerow ka jeedin jirey fagaarayaasha, hadaladaasoo ay ahaayeen runta, iyo in uu ka digi jirey dabar goynta ay damacsan yihiin reer Leego Mahaatiri.
Mar kale ayey xireen ayagoo dembi u yeelaya, ileyn mar walba wuxuu ka hadli jirey waxa ay sameynayaan in aanu saxneyn, Markey xiraanba waxey la caadeysteen ayey ku sameyn jireen, jir dilkii iyo ciqaabistii u goonida aheyd, ayna ciqaabayeen ilaa ay ka dilaan, Maaling Yerow wuxuu noqdey mid uu xabsiga ugu dhinto sey u jir dilaayeen.
Siyaasiyiinta iyo wax garadka Qowmiyadda DigilMirifle oo ay Leego xabsiga u taxaabtey waxey gaarayaan nambar aad u sareeya, ayagoo Markey nin siyaasi ama nin karmeed DigilMirifle ah ay dilaanba ka dhici jirey culeys aad moodid in uu dusha ka saarnaa, sababtoo ah waxaa sii yaraanayey siyaasiyiintii afkaartooda kululeyd oo runta taabsiin jirtey, rabeyna in ay arkaan dadkooda oo xur noqdey ay arkaan, helaana madax-banaanidooda, arimahooda gudahana ayaga u khaas noqoto.
Godane iyo Roobow oo khilaafkooda faraha ka baxay
Seteembar 28, 2010
Khilaaf mudo ka dhex jiray Hogaamiyaha Al-Shabaab Ahmed Abdi Aw Mohamud Godane iyo ku xigeenkiisa Mukhtaar Roobow Cali ayaa cirka isku shareeray kadib markii uu guuldaro ku dhamaatay shir lagu dhexdhexaadinayay oo sedex maalmood uga socday Hotel ku yaal Magaaladda Marko ee gobolka Shabeeladda hoose.
Khilaafka ayaa laba kacleeyay kadib markii Ahmed Godane golaha sare ee talada Al-Shabaab ka saaray Mukhtaar Roobow,sidoo kalena amray in la dhameeystiro Sarkaal ku dhaawacmay dagaaladda Muqdisho,kana tirsanaa garabka Melleteri ee Mukhtaar Roobow Cali sida ay Waajidpress.com u xaqiijiyeen ila wareedyo muhiima.
“Meeshii aan istaagaba telefoon dacwada ayaa ii soo dhacaya,waxay dadka i soo wacaya ka dacwoonayaan cadaalad daro lagula kacay,oo qaar ka mida madaxda Al-Shabaab kula kaceen,Cadaalad daradaas mudo ayaan ka aamusnaa,maanta aniga ayey igu dhacday,waxaan idiin sheegayaa in Sheekh Ayuub oo u dhashay Raxanweyn, Jiroon oo ah taliyahii Mujaahidiinta barriga Bay ku dhaawacmay dagaaladii Muqdisho kadibna aan waayay warkiisa,markii aan raadshay ayaa la ii sheegay in la dilay,oo la dhameeystiray,Amiirka ninkaad u taqaanaan ee Ahmed Godane ayaan waydiiyay ,wuxuuna iigu jawaabay,Sheekh Ayuub markaan aragnay inuu liito,ayaan amar ku bixinay in Shahaadadiisa loo fududeeyo ,isaga iyo Mujaahidiin badan,waana la dhameeystiray”ayuu yiri Mukhtaar Roobow oo Maleeshiyaad ka amar qaata kula hadlayay Magaaladda Baydhabo.
Mukhtaar Roobow oo loogu yeero Abuu Maansuur sedex jeer ayuu dhaartay,oo yiri SUMA WALAAHI,SUMA WALAAHI,SUMA WALAAHI ,inaysan Ahmed Godane iyo qolada la safan cadaalad iyo diin agtooda oolin,waxaana idinkugu bishaareeynayaa in xaalada wax iska bedeli doonaan.
Markii lagu kala tegay shirkii Marko oo Mukhtaar Roobow uu qaatay dhaawacyadii ka yeelay Muqdisho iyo Shabeeladda hoose ,sidoo kalena kaxeeystay Maleeshiyaadkii beeshiisa,waxaa uu Amiirka Al-Shabaab khudbad uu jeediyay ku gaabsaday in Abuu Mansuur yahay nin ka leexday hadafka Jihaadka lagana saaray golaha sare hasse yeeshee Ibrahim Xaaji Jaamac Meecaad Afakhani oo ay isku reer yihiin Godane ayaa khudbad uu jeediyay ku weeraray Abuu Maansuur,wuxuuna yiri ” Waa daalim Mukhtaar Roobow,waa nin qabyaalad ka buuxda,wuxuu yahay maleh,hanaga tago”.
Fu’aad shongale oo ka mid ahaa gudigii dhexdhexaadinayay Ahmed Godane iyo Mukhtaar Roobow ayaa Magaaladda Baydhabo khudbad uu kula hadlay Saraakiisha Maleeshiyadda Al-Shabaab wuxuu ku yiri”Dagaal Mujaahidiinta dhexdooda ah ayaa laga yaabaa inuu bilaawdo, dagaalkaas haduu bilaawdo waa fitno, yaan laga qeyb gelin, nin walba beertii aabihiis ha aado”
Qaar ka tirsan Saraakiisha Al-Shabaab ayaa ku xog waramay in Ahmed Godane yahay nin qabyaalada ku weyn tahay laabtiisa,uuna madaxda ugu sareeysa Amniyaadka,dhaqaalaha iyo gaashaandhiga ka wada dhigay Saraakiil reerkiisa ah sida Ibrahim Afakhani,MMNUR,oo loo yaqaan Faruur iyo Caraale.
Lamma ogga sida uu ku aakhirsan doona khilaafka Godane iyo Mansuur laakiin wuxuu Ahmed Godane aad u habeeyay Maleeshiyaad u dhashay beesha Hadamo kuwaas oo la sheegay inuu rumeeysan yahay inay asal ahaan u dhasheen Beesha Arab ee Isaaq,uuna isaga ka dhashay.
Goboladda Jubooyinka,Bay iyo Bakool,Shabeeladda hoose iyo Hiiraan waxaa ka madaxa rag u dhashay beesha Ahmed Godane.
123 ka tirsan Maleeshiyadda Al-Shabaab oo la sheegay inay dhaawacyadooda halis ahaayeen ayaa la qarxiyay inta godad lagu shubay kadib markii uu sidaa amray Ahmed Godane oo ku sifeeyay amarkiisa mid ragaas loogu sahlayay gelida Janadda.
Taariikhda waa markii ugu horeeysay ee gudaha Somalia lagu arko maleeshiyo ay nolosha ku gubayaan isla kooxdii ay ka tirsanaayeen
Xubnaha Ugu CadCad Wasiirka 1-aad iyo faalo
Waxaa lagu wadaa in dhawaan lagu dhawaaqo ra’iisulwasaare cusub oo xilkaasi sii haya muda’da ka yar sideeda bilood ee u harsan dowladda KMG ah, iyadoo ay haatana socoto xulashada xubnaha loowado in ay kaalintaasi buuxshaan, anagoo kala qaadi doona sida ay u kala culus yihiin waxaana diirada ku saari doonaa 4-ta xubnood ee miiska haatan saaran.
Madaxweynaha ayaa waxaa naga xusuusa inuu marka hore kasoo jeedo beesha Hawiye isagoo isla markaasna xulufo la ah kooxdii Asmara la oran jiray balse haatan uu u xuub siibtay kooxda Ahlu Sheekh oo ah koox diimeed ku cusub saaxada Soomaaliya xaga siyaasada.
Hadaba maadaama sida uu dastuurka sheegayo waxaa xilka wasiirka koowaad laga soo xulayaa beelaha kale ee aanan ku heybta aheyn Madaxweynaha, waxaana loo badinayaa beesha Daarood, iyadoo haatan musharaxiinta rasmiga ah ee aadka ugu badan in ay noqdaana ay yihiin kuwa halkaasi kasoo jeeda.
Musharaxiinta ugu cadcad ee afarta xubnooda ayaa kala ah:
1: Cabdikariim Jaamac – ururka Ahlu Sheekh kana soo jeeda Dhulbahante
2: Xuseen Cabdi Xalane – Weli ma cada urur balse kasoo jeeda Beesha Ogaadeen
3: Mahdi Sh. Daahir Sh. Nuur – ururka Ahlu Suna Waljameeca kana soo jeeda Beesha Ortable
4: C/waaxid Cilmi Goonjeex – Ex-TFG balse kasoo jeeda Beesha SadeMadaxweyne Sheekh Shariif masuuliyiin aad ugu dhowdhow oo ay diirad.com la xiriirtay ayaa inoo sheegay in uu Madaxweynaha jeclaan lahaa in xilkaasi loo magacaabo ninka ay isku xulufada yihiin ee lagu magacaabo Cabdikariim Jaamac, balse taasi waxaa aad uga soo horjeeda dalalka reer galbeedka oo Cabdikariim u arka shaqsiga fashiliyay siyaasada Shariif maadaama uu ahaa nin la’taliye gacan yare dhinacyo badan.
Shaqsiga labaad ee isagana haatan miiska saaran ayaa ah nin aysan aqoon fiican isu laheyn dowladaha iyo siyaasadaha Soomaaliya oo isaga lagu sheegay inuu yahay nin saaxadan ku cusub balse UNDP Sudaan waxbadan kasoo shaqeeyay, Md.Xalane maadaama uu asal ahaan kasoo jeedo beesha Ogaadeen waxaa jira daneyn xaga Itoobiya ay rajeyneyso in la keeno nin beeshaas kasoo jeeda si xasarada siyaasadeed ee Kilinka uu lug ugu yeesho.
Shaqsiga sadaxaad ayaa ah nin cududiisa loo maleen karo inuu hanasho badan ka keensankaro dhow meel, hadaba aanu kala saarno dhanka Beesha Caalamka waxaa ay dhawaan soo jeedisay in ninka xilka Wasiirka 1-aad loo magacaabayo uu noqdaa nin kasoo jeeda ururka Ahlusuna Waljameeca, Mahdi Sh. Daahir ayaa sidoo kale ah nin kasoo jeeda beelaha Puntland taasoo dhinacaasna xaga isku miisaanka gobol, qabiil iyo ururba ay micno badan ka sameyn kareyso.
Shaqsiga afaraad ayaa ah sii hayaha haatan xilka wasiirka 1-aad C/waaxid Goonjeex waxaa isna loo arkaa maadaama uu kasoo jeedo ama uu ka mid yahay beelaha dhulkooda ay ka taliyaan ururada Alshabab iyo Xisbul Islaam in xagaas taageero ciidan looga helo beesha Sade.
Hadalka gunaanadkiisa ayaa waxaa uu yahay maxaa la gudboon Madaxweyne Shariif ma inuu qanciyo beesha Caalamka mise Beelaha Soomaalida amase inuu xusho shaqsiga sida rasmiga ah u gudan kara howlaha culculus ee xukumadaas horyaali doona, taasi jawaabteeda waxaanu ka sugeynaa markuu Madaxweyne Shariif uu ka soo laabto dalka Itoobiya.
War Deg Deg ah: Diyaarado helocopter-ah oo dulheehaabaya hawada sare ee Kismaayo
Diyaaradahaani oo joog hoose ku duulaya ayaa saacadihii ugu dambeeyey dul heehaabayey hawada sare ee magaalada kismaayo kuwaasi oo An ilaa iyo iminka la ogeyn halka laga lee yahay iyo u jeedka ay lee yihiin
Xilli maalmo ka hor diyaarad nooca helocopter-ah ay duqeyn dhinaca cirka ah ku fulisey guri ku yaala degmada marka ee xarunta Gobolka shabeelaha hoose ayaa 24kii saac ee ugu dambeeyey waxaa hawada sare ee magaalada kismaayo dul heehabayey diyaarado nooca helo ncopterka loo yaqaano kuwaasi oo ka soo kicitimayey maraakiib dagaal oo taagan meel Aan sidaasi uga fogeyn xeebta magaalada kismaayo
Waxaana diyaaradahaani ay cabsi iyo qal qal baah san ku Abuureen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo waxaana heegan la galiyey dhamaan ciidamada Amaanka maamulka islaamiga Al-Shabaab, kuwaasi oo hubka lidka diyaaraha ee qoryaha Zuuga iyo teedhizaman ku garaacey diyaaradaha dul hee haabayey hawada sare ee magaalada kismaayo.
Bartamihii sanadkii 2009 ayey aheyd markii diyaarado ay lee yihiin ciidamada kumaan dooska mareykanka ay duqeyn ka geysteen gobolada galgaduud iyo shabeelada hoose halkaasi oo ay ku qaara jiyeen Aadan xaashi (ceyrow) oo ahaa Amiirka tirsan xarakada Al-shabaab iyo saalax Ali saalax (Nabhaan) oo asana Ahaa nin ay siweyn u baadi goobi jireen dowladaha reer galbeedka.
War Deg Deg ah: Indha cadde oo dagaal qadka taleefanka ah ku qaaday Madaxweyne Shariif
Wasiiru Dowlahii hore Gaashaandhiga Dowladda KMG ee Soomaaliya sheekh Yuusuf Maxamad Siyaad indha Cadde ayaa madaxweyne Shariif laba maalin ka hor qadka taleefanka ugu goodiyey in uu dhawaan u talaabi doono dhanka Mucaaradka.
Jaale Indha Cadde oo helay xogta ah in Shariifka uu soo wado Maxamed dheere balse uusan soo celindoonin indhacade ayaa hadda u muuqda nin ay sheekadu ku cadaatay,shariifka ayaa sida aan ka soo xiganay ilo lagu kalsoonaan karo ka xumaaday goodinta indhacade, waxuuna u sheegay in ay muqdisho ku kulmayaan markii uu dalka dib ugu soo laabto.
Sheekh Yuusuf Indha Cadde ayaa ku goodiyey in uu dhawaan u talaabi doono dhanka kooxaha Mucaaradka, waa haddii uusan shariifka tixgelin dalabkiisa siyaasadeed, manacada inuu ka dhabeyn doono iyo inkale.
Mr. Indhacade oo Nin dagaalama ah ayaa waxay dad badan rumeysan yihiin inuu dowladda KMG u soo galay Cabsi uu ka qabay Ururka Alshabaab oo si hoose ugu xukumay in ay qaarajinayaan laakiin sirtaasi markii uu ogaaday si naftiisa u bad baadiyo dhanka Dowladda KMG ee Soomaaliya u soo talaabay.
Sidoo kale Mr. Indhacade oo bari Gudoomiye ka soo ahaa Gobolka Sh/hoose oo ahaa gobol aad u dhaqaale badan isla markaana ka soo galay Maxkamadaha isagoo ka mid ah Hogaamiye kooxeedyada kala qeyb qeybiyey dalka kuna biiray xoogagii Maxkamadaha Islaamiga ee xilligaan isaga soo horjeeda Siyaasadaha Soomaaliya.
Ururka Xizbul Islaam oo laba u kala jabay ayuu Indha Cadde ka mid ahaa garab ka mid ah Garabyadaasi, kuwaasi oo iyagoo baxsanaya ku soo biireen Dowladda KMG ee Soomaaliya iyadoo Afhayeenkii Ururkaasi uu maalin cad sheeay inuu isaga baxay Dowladda KMG kuna laabtay dhanka Kooxaha mucaaradka.
Wasiiru Dowlahii Gaashaandhiga Dowladda KMG ee Soomaaliya Yuusuf indhacade iyo ku xigeenkii gobolka banaadir ina shaaweeye ayaa waxaa la dareemi jiray maalintii ay dagaalka galaan wacdarooyin cusub aad ayeyna u nacbaayeen labadaan nin shabaabka iyi xizbiga.
Ugu danbeyntii warkan ka soo baxay Wasiiru Dowlahii hore ee gaashaandhiga ayaan la ogeyn sida uu ka yeeli doono sheekh shariif oo bari ahaayeen saaxiibo aad isagu dhow.
Warar kale: Xildhibaanada “Farxadeenu waa ka taqlusidii Sharmaarke balse hadda waxaan ruxid ku bilaabeynaa Shariifka”.
Kadib buuqii faraha badnaa ee u dhaxeeyey Shariifka iyo Sharmaarke kasoo ugu danbeyntii ku dhamaaday is casilaadii Sharmaarke kadib markii uu maaro u waayay kacdoonka Xildhibaanada iyo shariifka oo dabada ka riixaayey.
Marka aad tagto Hoteelada iyo meelaha ay ku qaxweeyaan Xildhibaanada baarlamanka KMG ee soomaaliya waxaad arkaysaa tiro xildhibaano ah oo si koox koox ah u shirayaan iyagoo ka sheekeysanayaan dadaalkii dheeraa ee meesha uga saareen Sharmaarke kadib markii ay ku qasbeeyn shariifka inuu sharmaarke iyo xukuumadiisa uu badalo, waxayna intooda badan ka midaysan yihiin is casilaadii Cumar C/rashiid.
Kacdoonkii ku yimid Sharmaarke ayaa hadda muuqda mid u jiheystay jaho cusub waxaana hadda socda mid kale oo ku wajahan Shariifka,Xildhibaanada ayaa hadda qorsheynaya in ay shariifka bililiqeystaan iyagoo seefaha u tumanaya ra’iisal wasaaraha cusub oo dhawaan laga filayo inuu shariifka soo magacaabo.
“Farxadeenu waa ka taqlusidii Cumar C/rashiid balse hadda sheeko fara kama qodna oo waxaaan isku diyaarineynaa jihaad cusub hadii uusan shriifka naga soo hagaagin” waxaa sidaa inoo sheegay mid kamid xildhibaanada baarlamaanka oo Muqdisho ku sugan.
Ugu danbeyntii Shariifka oo lagu xanto in uu si aad ah u ilaashado kursigiisa, isla markaana uu jecel yahay in uu qariyo qilaafaadka u dhaxeeya madaxda kale iyo isaga, waxa una isku dayaa inta badan in uu qilaafaadka jira si hoose u xaliyo, waana rajadda ay hadda qabaan xildhibaanada oo ay seeftoodu galka kala baxeen.
Seteembar 27, 2010
Madaxweynaha DFKM Sh Shariif Sh Axmed iyo wafdi uu horkacyo ayaa ka dhoofay magaalada New York ee dalka Marykanka isaga oo ku sii jeeda magaalada Madrid ee xarunta dalka Spain.
Madxweynaha DFKM Sh Shariif Sh Ahmed ayaa ka qeyb galaya kulanka kooxda xiriirka caalamiga ah oo ka dhacay dalka Spain shirkaas oo looga hadli doono arimaha Soomaaliya.
Faafahinta Duqeyntii Al-Shabaab
Seteembar 26, 2010
Diyaarad Nuuca qumaatiga u kaca ayaa duqeyn u geystay qeybo ka mid ah magaalada Marka ee Xarunta Gobalka shabeelada Hoose, iyadoo lagu waramayo in diyaaradaas ay ka soo dul kacday markab dagaal oo ku sugan biyaha ku dhow xeebta magaaladaas.
C/casiis A/qadir oo ah dadka diigaanka Marka ayaa sheegay in diyaarada oo ahayd Helicopter ay beegsatay xarun maamulka Al shabaab uu ku leeyahay magaalada marka ee Xarunta Gobalkaas .
” Duqeynta kadib waxaa laga soo saaray goobta dad gubtay oo hilibkooda la wayaya laakiin tiradooda ma garanayo walaal dadka lagu laayay meesha laakiin xarunta waxa ay aheed xarunta ugu weyne Shabab ee Sh/Hoose ” A/casiis .
Ciidamo farabadan oo ka tirsan al shabaab ayaa isku gadaamay goobta diyaarada ay ka fulisay weerarka waxaana mudo laga maqlay guriga diyaarada ay beegsatay dhawaqa hub waaweyn.
Dhanka kale C/casiis waxa uu Waajidpress u xaqiijiyay in ay diyaradaha ahaayeen 2 diyaarad oo ka soo dul kacay Xeebta Marka kuwaasi oo daqiiqad gudaheeda gantaal xoog badan ku dhuftay .
” Magaalada Dhan walaal way gariirtay aniga waxaan u jiray Goobta ilaa iyo 2 buqol oo mitir dukaan ayaan ku jiray alaabtii dukaanka dhulka ayee ku soo daadatay dhamaanteeda ,isla markiina dukanada waan xirnay qal qal farabadan ayaa ina soo wajahay ” C/casiis
Si kastaba ha ahaatee wili wax war ah kama soo bixin saraakiisha Xarakada Al-Shabab inkastioo la rumeysan yahay in goobta lagu dilay sarklaal sare oo katirsan Shabab ee lagu tiriyo in ay katirsanyihiin Ururka Al-Qacida .
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2010.